Android leh ama aan lahayn Google: Android bilaash ah! Maxay yihiin beddellada aan haysanno? | Laga soo bilaabo Linux
Android leh ama aan lahayn Google: Android bilaash ah! Maxay yihiin beddellada aan haysanno?
Maalin kasta, waa isbeddel in la isticmaalo barnaamijyo bilaash ah, furan oo ammaan ah iyo barnaamijyo, taas oo ah, kuwaas oo bixiya tallaabooyin iyo dammaanadaha gaarka ah iyo amniga kombuyuutarka. Maaddaama dadweynaha, macaamilka iyo muwaadinku, ay had iyo jeer raadinayaan waxyaabo kale oo lagu beddelayo wax kasta oo la isticmaalay. IYO «Android» sida «Sistema Operativo», ayaa ku jirta isha muranka, xiriirka dhow ee ay la leedahay «Google».
«Google», mid ka mid ah Rafaa tiknoolajiyadda kooxda «GAFAM», ka dhigay«Android» nooc ka mid ah barxadda lagu dhiirrigeliyo nafteeda iyo adeegyadeeda, kuwaas oo inta badan ku xeel-dheer waaya-aragnimo xun xagga siyaasadda ama cilladaha amniga iyo asturnaanta waxay ka dhigan tahay. Taas ayaa qabatay, taas beddelka bilaashka ah ee ku saleysan «Android» o «Linux»habboon, ama kuwa kale, dhammaan waxtar u leh.
Beddelka qaar ka mid ah ee suuqa soo galay, hore iyo maanta, labadaba waa beddelaadyo ahaa ama qayb ahaan ama wadar ahaan ahaa.
Taasi waa, waxay u dhexeeyaan si fudud oo aan u oggolaanayn codsiyada iyo adeegyada muhiimka ah illaa awood buuxda «Google» ilaa gabi ahaanba baabi'inta iyo xaddidaadda iyaga, xitaa la gaarsiiyo adeegsiga Nidaamka Howlgalka gebi ahaanba cusub ee ku saleysan «AOSP (Android Open Source Project)» ama mid laga soo bilaabo xoq, sida kiiskii ugu dambeeyay ee «Harmony OS» de «Huawei».
1 Beddelka bilaashka ah ee buuxa ee Android ee Google
1.1 Ugu weyn
1.1.1 AOSP (Mashruuca Ilaha furan ee Android)
1.2 Kale kale oo muhiim ah Android
Beddelka bilaashka ah ee buuxa ee Android ee Google
AOSP (Mashruuca Ilaha furan ee Android)
«Android Open Source Project (AOSP)» Es salka ama xudunta«Sistema Operativo de código abierto» aaladaha mobilada oo ay ugu horeeyaan «Google». Si kastaba ha noqotee, iyadoo «AOSP», «Google» waxay siisaa dadweynaha guud dhammaan macluumaadka iyo koodhka ilaha lagama maarmaanka u ah abuurista noocyo gaar ah oo ka mid ah «Sistema Operativo Android».
Sidoo kale, «AOSP» Waxay bixisaa walxaha lagama maarmaanka u ah inay awood ugu yeeshaan inay u qaadaan qalabka moobiilka ee lagama maarmaanka ah ayna taageeraan qalabka loogu talagalay madal «Android», Hubinta in qalabku buuxiyo shuruudaha iswaafajinta ee lagu ilaaliyo nidaamka deegaanka oo dhan. Ujeeddada «AOSP» waa in laga fogaado dhibic kasta oo udambeysa oo guuldarro ah halka hal ciyaartoy warshadeed uu xaddidi karo ama xakameyn karo hal-abuurnimada ciyaartoy kale.
«/e/» ama eelo ama e-google sida mararka qaarkood loo yaqaan, run ahaantii nidaam deegaan oo dhameystiran. Nidaamka Hawlgalku wuxuu diiradda saaray codsiyada iyo adeegyada khadka tooska ah ee lagama maarmaanka u ah khibrad isticmaale wanaagsan oo qancisa. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay adeegyo khadka tooska ah oo u gaar ah, sida mashiin raadin, emayl, keyd, iyo aalado kale oo khadka tooska ah ku shaqeeya, kuwaas oo abuura jawi asturnaan gaar ah oo waxtar leh.
Ururka taageera mashruucan, «e-Foundation», ayaa si rasmi ah u shaacisay «Sistema Operativo» ku saleysan «Android», si ay diyaar ugu tahay qiimeynta dhammaan. Intaa waxaa dheer, codsiyada ay iyadu sidoo kale ku saleysan tahay «código abierto», iyo sidoo kale waxay taageertaa fulinta codsi kasta«Android» jira.
«LineageOS»waa mid bilaash ah oo furan Nidaamka Howlgalka ee aaladaha casriga ah ee gacanta, kumbuyuutarrada gacanta, iyo xitaa kombuyuutarrada, oo ku saleysan «Android». Waxay ku dhalatay sidii dhaxalka mashruucii hore ee «ROM» caadada loo yaqaan «CyanogenMod».
Waxaa si rasmi ah loo sii daayay 24-kii Diseembar, 2016, iyadoo lambarka isha laga helayo laga heli karo «GitHub», iyo sida noocyada «Android», waxay leedahay noocyo gaar ah oo loogu talagalay hal nooc. Laga soo bilaabo markii la bilaabay ilaa maanta, «LineageOS» rogeen«ROMs» waxaa loo heli karaa in ka badan 185 nooc oo taleefan ah, oo ay ku jiraan malaayiin rakibaado firfircoon, iyo bulsho weyn oo isticmaala.
«PostmarketOS» Waa a«Sistema Operativo»Linux ayaa loo habeeyay taleefannada iyo aaladaha kale ee mobilada. Lagu soo saaray «Software Libre» waara, oo diiradda saaraya asturnaanta iyo amniga, oo run u ah qaabka qaybinta Linux dhaqameedka, oo ay ku kala soocmayaan mudnaanta.
Hadda, «PostmarketOS» Waxaa soo saarey koox yar oo ka kooban horumariyayaal, jabsadayaasha, iyo kuwa hiwaayadda u leh hadafka guud ee ah in mobilada la siiyo meertada nolosha ee toban sano. Adeegsiga qaab dhismeed fudud oo waara oo laga soo amaahday qeybinta Linux caadiga ah, halkii laga isticmaali lahaa «Android» iyo / ama «AOSP». Mashruucu waa marxalad hore waxtarna uma leh dadka badankiisa xilligan.
«PureOS» Waa a«Sistema Operativo»gebi ahaanba bilaash, anshax iyo il furan oo aan ku dhisnayn«Android» oo inyar inyar oo caan ah ayaa loo ogaadey isticmaalkiisa goobta mobilada madaama loo isticmaalay telefoonada astaanta u ah shirkada «Librem» ay sameysay Shirkadda «Purism». Si kastaba ha ahaatee, «PureOS» Waa qaab-dhismeed isku mid ah, taas oo ah, waxay ku shaqeysaa aaladaha moobaylka, la qaadi karo iyo qalabka desktop-ka, sidoo kale waxaa lagu rakibi karaa aaladaha xusuusta USB.
Waxaa loo diyaariyey si ay u siiso adeegsadaha fursad uu dib ugu soo ceshado xakamaynta iyo ilaalinta macluumaadkooda gaarka ah, noloshooda dhijitaalka ah «Sistema Operativo» ku saleysan gebi ahaanba «Software Libre y de Código Abierto». Sidaa darteed, «PureOS» wuxuu la yimaadaa barnaamijka ugu fiican ee bilaashka ah ee bilaashka ah xagga amniga iyo asturnaanta si aad u awood ugu yeelatid inaad shabakadda si ammaan ah uga dhex adeegsato, adiga oo aan lala socon xayeysiistayaasha ama kuwa wax iibinaya. Intaa waxaa dheer, waxay kuu oggolaaneysaa inaad si fudud uqariso dhammaan OS-ga iyo xogta, oo leh furahaaga sirta ah. encryption.
«Replicant» sidoo kale waa a «Sistema Operativo» ku saleysan «Android», gebi ahaanba bilaash ah oo ay taageerto moodello badan oo qalab ah, oo lagu garto xoojinta xorriyadda, asturnaanta iyo amniga isticmaaleyaasheeda.
«Replicant» Waa nidaam gebi ahaanba bilaash ah, laakiin badanaa waxay ku timaaddaa isku-dhafnaan qaybaha lahaanshaha, sida qalabka wax lagu rakibo, shirkadaha iyo barnaamijka moodeelka, xaaladaha qaarkood. Si kastaba ha noqotee, isku mid, aaladaha qaarkood ayaa sidoo kale awoodi kara inay shaqeeyaan, tusaale ahaan, bootloaders ku saleysan «Software Libre».
Kale kale oo muhiim ah Android
Sidaan soo aragnay, waqti iyo maanta, waxaa jiray iskudayo badan oo aan lagu guuleysan oo xiiso leh, ama iskudayo muhiim ah oo guul leh oo lagu fuliyo«Android» aad uga xoreeya «Google» ama gebi ahaanba ka xor ah «Google». Ahaanshaha mid ka mid ah waaya-aragnimada ama ololaha ugu badan ee hadda jira «Fundación del Software Libre de Europa»wacid Xoree barnaamijkaaga 'Android'!, taas oo aan kugu martiqaadeyno inaad ogaato.
Haa, mar uun waad ku guuleysatay inaad isticmaasho mid ama in kabadan kuwa halkaan lagu xusay, fikirkaaga noo daa ku saabsan khibradaada, iyo haddii aad rabto inaad fikraddaada ka dhiibato, sidoo kale noo dhaaf faalladaada doodda iyo kobcinta dhammaan mawduuca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Android leh ama aan lahayn Google: Android bilaash ah! Maxay yihiin beddellada aan haysanno?
Nidaamyadan Operating-ka ee ku saleysan Android waa beddel, laakiin aniga aragtidayda, Habka Kernel Operating System ee Taleefoonnada Gacantu wuxuu noqon lahaa mid gaar ah oo halkii Google ay isticmaali karaan Duckduckgo ama Yandex ama beddelaad kale oo jirta, goor dhow ama ka dib waxaa jiri doona xoogaa isbeddello ah oo wax walba waa la beddeli doonaa iyo ilaa si lama filaan ah nidaam UNIX habboon oo loogu talagalay PC iyo Taleefan
Jawaab Juan Pablo Granados
Hubaal, qaar ka mid ah kuwa aan soo sheegnay waxay ku saleysan yihiin AOSP, qaar kalena Linux waxayna arki doonaan waxa Harmony OS dhab ahaan noo keenayo. Salaan, Juan waadna ku mahadsan tahay faalladaada.
Marka lagu daro raadinta degdegga ah, waxaa jira dhibaato aad u daran oo ku saabsan qalabka moobiilka: gabow.
Waagii hore waxaan isticmaali jiray CM / LineageOS oo waxaan ka saari jiray rakibaadda iyo dhibaatooyinka booting waxaan aad ugu faraxsanahay waxqabadka. Hada Terminalkeygii hore lama sii taageersani kii cusbaa waligoodna ma helin. Nasiib wanaag, xilligan waxaan wali ka helayaa cusbooneysiinta soo saaraha laba sano ka dib.
Waxaan idinkaga tegayaa olole xiise leh oo ka socda FSFe:
Faallo aad u fiican. Ku dar iskuxirka ololaha Xor Free your Android! dhamaadka maqaalka.
@admins, waxaad dhibaato ku qabtaa taariikhaha maqaallada iyo faallooyinka, maqaal shalay laga soo qaaday wuxuu u muuqdaa "1 daqiiqo kahor" isla marka ay u muuqato "16 saac ka hor" ama taariikh maalin kale ah. Waa jahwareer.
Aniga, kaliya waxaan ahay qoraa. Kuuma sheegi karo sababta laakiin sidoo kale waan ogaaday. Waad ku mahadsan tahay kormeerkaaga arrintan!
Su’aasha ay tahay inaan isweydiino waa is.
Immisa ayaa iibsan lahaa taleefan la’aan WhatsApp? Qofna, xitaa haddii Telegram ama mid kale uu 100 jeer ka fiican yahay.
Haddii taleefan loo isticmaalo in lagu wada xiriiro oo aadan la xiriiri karin hooyadaa, u dir sawirka bisadda saaxiibkaa Greenland ama wixii la mid ah, runti waxa aad haysataa taleefan maahan, waa ajende loogu talagalay «geeks»
Liiska, midka kaliya ee sida dhabta ah loo isticmaali karo waa LinageOS. Waxaan ku rakibay MI A1-ga oo si habsami leh ayuu u shaqeeyaa. Laakiin dabcan, oo leh adeegyada weyn ee G.
Haddii aan rakibo iyaga la'aanteed, taas oo suurtagal ah (Waxaan haystaa aasaasiga), waxay noqon laheyd ajandaha wicitaanada.
Nasiib darrose, Android waxay ka timid Google oo waxay leedahay wax walba oo aad u xidhan.
Ku jawaab zicoxy3
Salaan, Zicoxy3. Waad ku mahadsantahay faallooyinkaaga iyo aragtidaada ku aaddan arrinta.
Waan ku raacsanahay in LinageOS ay tahay tan ugu dhameystiran tan iyo markii aad rakibi karto Gapps laakiin whatsapp ayaa lagu rakibi karaa iyadoo aurora ay kula socoto barnaamijyada google iyadoon la ciyaarin google play.
Sailfish wuxuu umuuqdaa inuu horay usocdo laakiin waxba ma muuqdaan, laakiin dukaanka google-ka ayaa ka shaqeeya gudaha.
Ubuntu taabashada, laga yaabee ballanqaadkii ugu weynaa ee ay ugu wacan tahay saldhigiisa adag iyo taleefannada gaarka ah ee la heli karo.
Waxay kuxirantahay midkasta, laakiin asturnaanta iyo xoriyada qiimo ayey leeyihiin, waxba sahlanaan maayaan laakiin ka tanaasulka waxyaabaha aan caadiga ahayn ayaa naga dhigaysa horumar.
Jawaab Richard Gilbert
Salaan, Richard. Faallooyin wanaagsan iyo wax ku biirin.
Cloudflare waxay ku biirtay dadaalka loogu daro HTTP / 3 taageerada adeegyadeeda
Mozilla waxay shaacisay in Firefox ay u guureyso wareeg yar oo sii deyn ah